देउवा निवासमा बोल्दाबोल्दै पौडेल थचक्क: प्रहरीको डण्ठाले कुरकुरे हड्डी घोटिएछ! दुखाइ धेरै भयो - Sidha News
देउवा निवासमा बोल्दाबोल्दै पौडेल थचक्क: प्रहरीको डण्ठाले कुरकुरे हड्डी घोटिएछ! दुखाइ धेरै भयो
शुक्रबार पदाधिकारी बैठकमा सहभागी भएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बैठकबाट निस्कदै थिए । तर उनी बाहिर रहेका पत्रकारसँग बोल्दा बोल्दै रोकिए । आवाज रोकिएपछि सडकछेउमा गएर बसेका पौडेलले सासले भने, “मलाई अहिले दुखाइ साह्रो भयो, बोल्न गाह्रो भयो।”
पार्टीले लिएको नीतिबारे बताउँदै गर्दा बोली बन्द भएपछि पौडेलले तनहुँ घटनामा आफूले भोगेको पीडा सुनाउन थाले । “जसरी पनि रोक भन्ने प्रहरीलाई कडा आदेश रहेछ, हाम्रा कार्यकर्ता र साथीहरू पछाडिबाट आइरहेका बेला अगाडिबाट प्रहरीले लाठीले पेल्यो । प्रहरीको लाठी मेरो करङमा घुसेछ,” गला अवरुद्ध पारेर देउवा निवास बाहिर बस्दै भने, “प्रहरीको डण्ठाले करङ भाँचिएको त रहेनछ तर कुरकुरे हड्डी घोटिएछ, म बुधबारभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज थप पीडा खेपिरहेको छु।”
उनले व्यक्ति वा प्रहरी दोषी नभएको भन्दै जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने आदेश पालना गर्दा आफूलाई चोट पुगेको बताए। दुखाइ बढी भएपछि बुधबार बेलुका नै आफूले तातो पानीले लगातार सेकेको पनि बताए।
“दुखेपछि हट व्याग ल्याएर तातो बनाउँदै सेकियो, घाउ छैन दुखाइ धेरै भयो,” उनले भने, “डाक्टर भेटेपछि थाहा भयो तातोले हैन आइसले सेक्नुपर्ने रहेछ, गलत भएछ।”
तनहुँमा उनीमाथि भएको दुर्व्यवहारका विषयमै राखिएको बैठकमा पौडेल कडा रुपमा प्रस्तुत हुन पनि सकेनन् तर, मधुरो आवाजमा भए पनि कडा कुरा गर्दै उनले भने, “ओलीले अधिनाकवाद ल्याउनै खोजे अब हामी लड्न तयार हुनुको विकल्प देख्दिन।”
बैठकपछि पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली, यो सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीको नियतमा प्रश्न दोहोर्‍याए । “यो सरकारको नीति नै दमनकारी हो । प्रतिपक्षलाई जताततै दमन गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ,” पौडेलले भने, “राज्यले दमनकारी बाटो लियो। यो पछिल्लो घटना मात्र हो। यस्ता घटना गाउँगाउँमा जिल्ला जिल्लामा घटिरहेका थिए।”
उनले कांग्रेसले गरेको धैर्यता सरकारले कमजोर ठानेको बताए । “हामीले धेरै धैर्य गर्‍यौ यो भन्दा बढी हामीले सहन सकिन्न,” पौडेलले लामो सास फेरेपछि भने,“किनभने देश हेर्दा हेर्दै प्रतिगमनतिर सर्वसत्तावादतिर लैजाने प्रयास भयो। यसलाई रोक्ने हामी नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य हो।”
उनले सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ जान नदिन आगामी २९ गते सांकेतिकरुपमा एकदिने देशव्यापी विरोधको कार्यक्रम गर्ने र त्यसपछि नसुध्रिए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।
“कम्युनिष्टको चरित्र नै अधिनायकवाद, अतिवाद हो । उनीहरु लोकतान्त्रिक हुँदै होइनन्, उनीहरुले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न सकेकै छैनन्,” पौडेलले भने, “अहिले सत्ता भेट्टाउनेबित्तिकै यही समयमा नियन्त्रणमुखी सर्वसत्तावादको बाटोमा लैजानुपर्छ त्यसका लागि छोड्न हुँदैन भनेर उनीहरु स्टेप बाइ स्टेप गर्दै नियन्त्रण कायम गर्न एकपछि अर्को कदम उठाउन तल्लिन छन्।”
उनले कम्युनिष्टहरूले नेपाली जनतालाई झुक्याउन शब्दजालको प्रयोग धेरै गरेको भन्दै झुक्याएर उनीहरुले कांग्रेस भन्दा लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने गरेको बताए । “उनीहरुले हामीभन्दा लोकतान्त्रिक हौँ भनेर पनि जनतालाई ढाँटेका छन्, ” उनले भने।
उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई मात्र नभएर सबैलाइ नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको बताए । उनले कांग्रेसको पनि केही कमजोरीले गर्दा सरकार सर्वसत्तावादउन्मुख भएको बताए।